Fotoana famakiana: 8 minitra Fantatry ny rehetra fa ny PowerPoint no fitenin'ny orinasa. Ny olana dia ny ankabeazan'ireo rindrambaiko PowerPoint dia tsy inona fa ny andian-tsary mihetsiketsika diso tafahoatra ary matetika mampihetsi-po izay miaraka amina resaky ny mpanolotra. Rehefa namolavola famelabelarana an'arivony izahay dia nahita fomba fanao tsara indrindra izay tsotra nefa tsy dia miasa firy. Noho izany antony izany dia namorona Center of Gravity izahay, rafitra vaovao amin'ny fananganana fampisehoana. Ny hevitra dia ny deck tsirairay, ny slide rehetra, ary ny atiny rehetra